घरबाट यी ६ पुराना चिज तुरुन्त हटाउनुहोस् : निकै अशुभ साथै भाग्यनाश हुन्छ ! - Babal Khabar
घरबाट यी ६ पुराना चिज तुरुन्त हटाउनुहोस् : निकै अशुभ साथै भाग्यनाश हुन्छ !
September 25, 2021 September 25, 2021 by बबाल खबर
घरमा राखिएको हरेक एउटा चिजले शुभ र अशुभ प्रभाव पार्छ ।
यस्ता चिजले घरको माहौल निर्धारित गर्छ । वास्तुका अनुसार घरका केही वस्तुले सकारात्मक त केहीले नकारात्मक ऊर्जा ल्याउँछ ।
सकारात्मक उर्जा भएका वस्तु राख्दा घरमा सुख–समृद्धि आउँछ भने नका रात्मक ऊर्जा भएका वस्तुले हानी मात्रै गर्छ ।आउनुहोस्, यस्ता चिजबारे जानकारी लिऔं जसलाई राख्दा घरमा सधैं पैसाको अभाव हुनेगर्छ ।
पुराना पत्रिकाःधेरैजसो घरमा पुराना पत्रिका जम्मा भएर बसेका हुन्छन् । मानिसहरु आ–आफ्नो तरिकाले यी पत्रिका प्रयोग गर्ने गर्छन् । वास्तुका अनुसार यस्ता वस्तुले घरमा समस्या निम्त्याउने गर्छन् । पुराना पत्रिकामा धुलो–माटो जम्ने गर्छ र ओसिलो ठाउँमा राख्दा किरा जन्मिने हुर्कने डर पनि रहन्छ ।
एक तरिकाले यसले घरमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा गर्ने गर्छ ।यदि तपाईंको पनि घरमा पुराना पत्रिका जम्मा गर्ने बानी छ भने छिटोभन्दा छिटो यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् । घरको नकारात्मक ऊर्जाले परिवारमा कलह हुन्छ, सफलतामा बाधा उत्पन्न हुन्छ र घरका सदस्यले आर्थिक हानी व्यवहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले समय समयमा पुराना पत्रिका घरबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ ।
बिग्रिएका, पुराना ताल्चाःघरमा पुराना र बिग्रिसकेका ताल्चालाई राख्नु हुँदैन । वास्तुशास्त्रमा यसलाई असाध्यै अशुभ मानिन्छ । वास्तुका अनुसार राम्रो स्थितिमा भएको ताल्चा भाग्य खोल्नेको प्रतिक हुन्छ जबकी बन्द वा खराब ताल्चाले घरमा दुर्भाग्य ल्याउँछ ।
जुन ताल्चा बिग्रिएका छन् र प्रयोग गर्नु हुन्नँ, त्यसलाई तुरुन्त हटाउनुहोस् । बिग्रिएका ताल्चाले करियरमा बाधा उत्पन्न गर्ने र सफलताको मार्ग बन्द गरिदिने मान्यता छ । त्यसैले घरमा बिग्रिएका पुराना ताल्चा नराख्नुहोस् ।
पुराना–च्यात्तिएका कपडाःवास्तुशास्त्रका अनुसार कपडाको सीधा सम्बन्ध भाग्यसँग हुन्छ । घरमा काम नलाग्ने, फाटेका, पुराना कपडाले सधैं दुभाग्य ल्याउँछ । यस्तोमा यस्ता कपडा घरबाट हटाउने वा कसैलाई बाँडिदिन नै राम्रो हुन्छ नभए तपाईंको भाग्यले तपाईंलाई साथ दिन बन्द गर्नेछ । वास्तुका अनुसार फाटेका, पुराना कपडाले करियरमा बारम्बार बाधा निम्त्याउने गर्छ ।
बन्द घडीःघडीका सूईले जीवनलाई अघि बढ्न मद्दत गर्छ । यस्तै बन्द घडीले जिन्दगीमा बाधा बारे बताउने गर्छ । वास्तुका अनुसार घरमा बन्द घडी राख्दा भाग्य पनि रोकिने गर्छ र खराब समय चाँडै नै समाप्त हुँदैन ।यदि तपाईंको घरमा बन्द, पुरानो घडी छ भने यसलाई तुरुन्त हटाउनुहोस् । बन्द घडीले राम्रो समय आउन नदिने र जीवनको सुख–समृद्धिमा बाधा उत्पन्न गर्ने मान्यता छ ।
खराब जुत्ता–चप्पलःवास्तुशास्त्रमा जुत्ता चप्पलको सम्बन्ध संघर्षसँग जोडिएको हुन्छ । जीवनमा संघर्षलाई कम गर्न चाहनुहुन्छ भने जुत्ता–चप्पल राम्रो स्थितिमा राख्नुहोस् । घरमा पुराना, फाटेका वा खराब जुत्ता चप्पल राख्दा संघर्ष थप बढ्ने गर्छ ।
यसो गर्दा साना काम गर्न पनि अत्यधिक मिहिनेत गर्नुपर्छ ।घरमा यदि पुराना र फाटेका जुत्ता चप्पल छन् भने यसलाई घरबाट बाहिर निकाल्नुहोस् । यस्ता जुत्ता–चप्पल शनिबार हटाउनुहोस् । यसो गर्दा शनिको अशुभ दशा कम हुन्छ । तपाईंसँग जुत्ता चप्पलको संख्या कम भएपनि त्यो सही स्थितिमा हुनुपर्छ ।
देवी देवताका पुराना मूर्ति र चित्रःदेवी देवताको मूर्ति र चित्रले एक निश्चित समयसम्म शुभ तरङ्ग सञ्चार गर्छ । त्यसपछि यसबाट नकारात्मक तरङ्ग निस्कन थाल्छ । त्यसैले पुराना मूर्ति वा चित्रलाई परिवर्तन गरिरहनुपर्छ ।
यसलाई बिग्रनु अघि नै जमिनमा गाडिदिनुहोस् वा पानीमा बगाइदिनुहोस् ।देवी देवताको मूर्ति र चित्रले एक निश्चित समयसम्म शुभ तरङ्ग सञ्चार गर्छ । त्यसपछि यसबाट नका रात्मक तरङ्ग निस्कन थाल्छ । त्यसैले पुराना मूर्ति वा चित्रलाई परिवर्तन गरिरहनुपर्छ । यसलाई बिग्रनु अघि नै जमिनमा गाडिदिनुहोस् वा पानीमा बगाइदिनुहोस् । उज्यालो टायमबाट साभार गरियको ।
Posted in ब्यानर पोष्ट
Prevकाठमाडौंमा युवतीले भेट्न बोलाएपपछि खुसि हुँदै पुगेका हेमराज झन्डै……
nextयी ४ राशिका पुरुषले पाउँछन् सुन्दर श्रीमती, तपाई पर्नुभयो त ?